Lalàna vaovao momba ny fitsaboana any Hongria: mety hahatezitra ireo ho renim-pianakaviana nametraka drafitra momba ny fiterahana · Global Voices teny Malagasy
Mety ho raràna tsy hisafidy izay mpitsabo mpampiteraka ry zareo
Nandika (fr) i Hélène Marpeau
Voadika ny 28 Febroary 2021 14:07 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Français, Português, Dansk, Română , English
Fitiliana ny kibo. Sary an'ny Doktor24 Medicina Zrt., nahazoana alàlana.
Lahatsoratra anglisy niandohana, nivoaka tamin'ny 4 Febroary 2021.
Ao Hongria, mety hitondra mankany amin'ny fameperana ny fahalalahan'ireo vehivavy bevohoka tsy ho afaka hisafidy izay mpitsabo tiany hatonina ny lalàna iray vaovao mifandraika amin'ny fikarakaràna ara-pitsaboana, izay nametraka ho tanjona ny fampiakarana ny karaman'ireo matianina misahana ny fahasalamàna sy ho famongorana ny kolikoly ao anatin'io sehatra io.
Nolanian'ny Antenimiera hongroà tamin'ny Oktôbra 2020, voalazan’io lalàna vaovao io [ang] ny fanondrotana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana amin'ny sehatry ny fahasalamàna, izay efa nandrasana ela. Misy fepetra vaovao ihany koa entiny ho an'ireo sady miasa amin'ny fanjakana no miasa koa amin'ny tsy miankina.
Raràn'io lalàna io ny fanaovana ilay fomba fanao, kanefa dia miparitaka be, fanomezan'ireo marary fankasitrahana ho an'ireo mpitsabo sy infirmiera. Ireo « paraszolvencia », araka ny fiantso azy ao Hongria, dia heverina ho toy ny endrika kolikoly. Entanina mihitsy ireo marary mba handrotsaka vola fanampiny na fanomezana lafo vidy ho an'ireo matianin'ny fahasalamàna ho takalon'ny tsy fampidirana azy ho ao anaty lisitra fiandry na mba hahazoana fikarakaràna tsara ao anatin'ny rafitry ny fahasalamàna vatsian'ny fanjakana vola.
Omen'ilay lalàna vaovao sazy 5 hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina [ang] ireo mpiasa manaiky handray vola na fanomezana avy amin'ny marary. Tsy natao handrisika io fomba fanao io ilay fanondrotana karama.
Raràn'io lalàna io ihany koa ny fandehanan'ireo mpitsabo miasa amin'ny fanjakàna tsy handeha hanao asa hafa any amin'ireo klinika tsy miankina, raha tsy hoe nahazo alàlana avy amin'ireo manampahefana afaka manao izany. Sakanan'ilay lalàna ihany koa ny fanarahana maso ataon'ireo mpitsabo tsy miankina an'ireo marary mandeha manatona azy ireny rehefa hitsabo tena noho ny aretina iray mitovy any amin'ny hopitalim-panjakana izy ireny.
Iray tamin'ireo fiantraikany tsy nampoizina tamin'ireny fepetra vaovao ireny ny hoe tsy afaka intsony hisafidy izay mpitsabo hanaraka ny vohoka entiny ireo vehivavy bevohoka. Fomba fanao any Hongria ny hoe any amin'ireo klinika tsy miankina ny vehivavy no arahana maso mialoha ny hiterahany, ary miaraka amin'iny mpitsabo iny ihany koa, mandeha miteraka any amin'ny hopitalim-panjakana, toerana iasàn'io mpitsabo io ihany koa. Fisorohana ny fidanganan'ny vola aloa any amin'ny klinika tsy miankina no antony, na dia amin'ny ankapobeny aza, manolotra fanomezana na mandrotsaka vola fanampiny ho an'ireo mpitsabo ny marary.
Amin'io lalàna vaovao io, ireo vehivavy mitondra vohoka misafidy ny hiteraka any amin'ny hopitalim-panjakana dia izay mpitsabo miandry raharaha ao no handray an-tànana azy, na fantany io na tsia.
Any amin'ireo firenena eorôpeàna manana rafitra fitsaboana tantanin'ny fanjakàna, toa an'i Royaume-Uni [ang], Pays-Bas [ang] na i Soeda [ang], tsy afaka manatona mpahay manokana ireo marary raha tsy misy taratasy avy amin'ny mpitsabo ankapobeny, saingy azon'ireo vehivavy mitondra vohoka atao ny manatona izay mpitsabo mampiteraka tiany hatonina.
Tao amin'ny Kossuth Radio, onjampeo iray akaikin'ny fitondràna, niaiky [amin'ny fiteny hongroà, hu] ny minisitry ny fahasalamàna, Miklós Kásler, hoe « mila fepetra voazava tsara amin'ny antsipirihany ny fanasarahana ny tontolon'ny sehatra ara-panjakana sy ny tsy miankina ». Nanome toky ihany koa izy ho an'ireo mpihaino fa ny ministera dia niaraka niasa akaiky tamin'ny Tranoben'ny Fahasalamàna ao Hongria ary ireo sendikàn'ny sehatry ny fahasalamàna.
Io Tranobe io anefa no nilaza fa manohitra ny fametrahana sivana, tamin'ny fanamafisana [hu] hoe mety ho tsy fahatomombanana hanome vahana ny fitohizan'ireo fomba fanao manome fanomezana izany. Miara-dàlana amin'izay, nanamafy ireo sendikan'ny sehatry ny fahasalamàna, tao anaty fampitam-baovao iray [ang] fa mety « tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana » ilay lalàna noho izy mety hametra ny fahalalàna hiasa.
Raha ny 1 Janoary no nanomboka nihatra ilay fampiakarana ny karama, ireo fepetra hafa voalazan'ilay lalàna kosa tsy hihatra raha tsy amin'ny Martsa.
Tanaty antsafa notanterahan'ny Global Voices, ny dokotera Agnes Ruzsovics [ang], mpitsabo manampahaizana manokana momba ny zo hanana fahasalamàna no sady mpanolotsaina momba ny lalàna ho an'ny iray amin'ireo mpanome fikarakaràna ara-pitsaboana tena goavana ao Hongria, no nanazava ny mety ho dikan'io fepetra vaovao io ho an'ireo marary:
Dr Agnes Ruzsovics. Sary nampiasaina miaraka amin'ny fanomezany alàlana.
Fandraisana andraikitra iray lafatra ny fiadiana amin'ilay fomba fanao manolotra fanomezana, tafiditra amin'izany ny fomba fijerin'ny mpitsabo. Kanefa, eny an-kianja, io fanamboarana io dia manakana ireo vehivavy tsy ho afaka hisafidy izay mpitsabo mpampiteraka metimety aminy rehefa hiteraka.
Raha lazain'ny voasoratra tany am-boalohany ny mety hisian'ny zava-maningana, mbola ilaina foana ny tsy maintsy hanamafisan'ny governemanta azy ireny, na ohatra aza io lalàna vaovao io ka ho ampiharina afaka volana iray. Raha ny toerana misy ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao, aorian'ny 1 Martsa, mety tsy ho afaka hisafidy velively izay mpitsabo mpampiteraka ananany fahatokiana mba handray an-tànana ny fiterahan-dry zareo ireo vehivavy mitondra vohoka, saingy tsy mbola azo antoka izany. Tsy mahavaly ireny fanontaniana ireny ry zareo mpitsabo satria tsy ampy ihany koa ny torohay eo an-tànany. Ny hoe manao fanarahamaso mialoha ny hiterahana miaraka amin'ny mpitsabo iray sy ny tsy fahafahana miteraka miaraka amin'ny fanatrehany, afangaro amin'ny fiovàn'ny toepo mifandray amin'ny fitondràna vohoka sy ny tsindry fanampiny ateraky ny valanaretina, dia vao mainka maha-sarotra ny toedraharaha ho an'ireo vehivavy bevohoka.
Noho ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny lafiny lalàna, nisy hopitaly iray niezaka nanentsina ny banga tamin'ny famoahana ireo torolàlana avy aminy manokana [hu], nandrarà ireo reny mitondra vohoka tsy hiteraka arahan'ireo mpitsabo mpampiteraka nosafidiany, mandritra ny fotoana tetezamita mitatra hatramin'ny 1 Martsa.
Fifanjevoana sy hasosorana no nandraisan'ireo marary ilay fanapahankevitry ny hopitaly, dia ireo marary izay nitaky [hu] ny hisintonana ireny fepetra vaovao ireny.
Ho setrin'ireo taridàlana navoakan'ilay hopitaly, namoaka fanambaràna iray ny ministera misahana ny seraseram-bahoaka, ka tao anatin'izany no nilazàny fa « tsy azo ekena ny fampiasàna ny ady amin'ny kolikoly ho antony anaovana sakana amin'ny fahalalahana hanan-tsafidy » [hu]. Fa mahatsikaiky, ireo fepetra natsofoky ny mpahay lalàna ho ao anatin'ilay lalàna vaovao dia mety hitondra vokany mitovy ihany.
Raha mbola eo an-dalam-panoratana azy ny didy fampiharana io fepetra vaovao io, marobe ireo mpitsabo tsy mahafantatra na tokony hanao sonia na tsia fifanarahana asa ry zareo amin'ity taona ity.
Tao anaty taratasy iray [hu ; pdf] tamin'ny 21 Janoary nalefa ho an'i Zoltán Jenei, talen'ireo hopitalim-panjakana, ny Tranoben'ny Fahasalamàna ao Hongria dia nanangana lisitra misy ireo fitakiana avy amin'ireo matianin'ny fahasalamàna. Hita anatin'izy ireny ireo fangatahana fampahafantarana misimisy kokoa momba ireo fepetra azo ampiharina amin'ny ora ambony ampanga aloa vola sy ireo fangatahana andro tsy iasàna, ary hatramin'ny fomba fahazoana alàlana hiasa ivelan'ny rafitry ny fitsaboana ambany fiahian'ny fanjakàna.
Raha nanakaiky ny andron'ny 28 Febroary, tsy mbola nitondra valiny ho an'io taratasy io foana ireo solontenam-panjakàna, tsy namoaka fanambaràna, na namaritra fepetra manokana ho an'ny resaka fiterahana sy fanarahamaso ny vohoka.